Ingcuka emdaka - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Ingcuka emdaka [Hyaena brunnea]
Ingcuka emdaka ephumla kwindawo yengca. Lesi sidalwa sichaze iindlebe kunye nemilenze emilenze enebala elimnyama ukuya kwengubo emnyama, iigxala ezimhlophe nentamo. Ima 800 mm ehlombe kwaye ilinganisa i-40 Kg. Zineenkomfa ezinde ze-krafini ezigqithiseleyo ukusuka kwintamo yazo emathanjeni. Intloko nentamo, ziyimfutho, kwaye imilenze, ihlanganiswe nemibhobho emdaka kunye negrey.
Ingcuka emdaka uyimoto ye-carnivore eye yatshintsha indlela yokuphila. Kodwa kuya kubakho ukuncedisa ukutya kwayo kunye nezinambuzane, amaqanda eentaka kunye neziqhamo zasendle kunye nokuze zibulale izilwanyana ezincinci.
Ingcuka emdaka ingumkhwayizi, izondla kwizidumbu zezilwanyana ezinkulu ezibulewe zezinye izilwanyana. Umhlathi wabo kunye nokulungelelaniswa kwamazinyo avumela ukuba bavule amathambo amathambo amathambo amakhulu kwaye badle umongo ngaphakathi.
Iingcuka ezimdaka angabalimi bangexesha lonyaka kwaye anesiqingatha seentsuku ezingama-90. Amabhinqa abeletha 1 ukuya ku-4 omncinci. Abancinci banamanywa ngaphezu konyaka kwaye bahlala emgodini ukuya kwiinyanga ezili-18.
Ubisi lukaMama luxhaswa ngenyama ukusuka kwiinyanga ezintathu. Xa uzalwa uBrithani Hyena unemibala yomzimba ofanayo kunye nabantu abadala kwaye bafikelela ubungakanani obupheleleyo ngeenyanga ezingama-30.
Ukuvalela kwe-ngcuka emdaka. Bahlala bodwa kunye nobusuku, belele ebudeni bemini okanye kwiindawo zokungcebeleka zase-Aardvark. Iingcuka ezimdaka ahlala kwiintsapho ezincinci ezivela kwibini yokuzalana kunye nabantwana babo kumaqela amadoda athile aqolileyo kunye nabasetyhini. Intsapho isebenzisana ngokusemandleni kwintsimi, kodwa ingadli ndawonye.
Indawo yokuhlala apho ifunyanwa ngokuqhelekileyo.KwaseMzantsi Afrika bafunyanwa kwiindawo zokuhlala ezisezantsi, iziqithi, intaba kunye neentlango. Yisilwanyana esiphume kakhulu, njengoko kuboniswe yinyaniso yokuba isaphila ngasentla-ntshona kwePitoli kwiintaba zeMagaliesberg.
Iingcuka ezimdaka aqhelekileyo ngamehlo e-Skeleton Coast, apho adla khona kwi-detritus ehlanjwe e-Atlantic Ocean. Bajwayele ukukhusela iindawo ezihlala zihamba ngengcuka emdaka.